I-CPU CORES VS IMISONTO ECHAZIWEYO-NGUWUPHI UMAHLUKO? - ITHAMBILE
I-CPU Cores vs Imisonto echaziweyo-Nguwuphi umahluko?
Ngaba ukhe wacinga ngomahluko phakathi kweCPU Cores kunye nemisonto? Ngaba ayibhidanisi? Ungakhathazeki kwesi sikhokelo siya kuphendula yonke imibuzo malunga neCPU Cores vs Ingxoxo yeMisonto.
Khumbula ixesha lokuqala sithatha iiklasi kwikhompyuter? Yintoni into yokuqala esayifundayo? Ewe, yinyani yokuba i-CPU yingqondo yayo nayiphi na ikhompyuter. Nangona kunjalo, kamva, xa sasisiya kuthenga ezethu iikhompyuter, sabonakala silibale ngayo yonke loo nto kwaye asizange sicinge kakhulu malunga noku. ICPU . Inokuba siyintoni isizathu soku? Enye yezona zinto zibalulekileyo kukuba asizange sazi kakhulu malunga ne-CPU kwindawo yokuqala.
Ngoku, kweli xesha ledijithali kunye nokufika kobuchwepheshe, zininzi izinto ezitshintshileyo. Kwixesha elidlulileyo, umntu wayenokulinganisa ukusebenza kwe-CPU kunye nesantya sewotshi yodwa. Noko ke, izinto azikhange zihlale zilula kangako. Kutshanje, i-CPU iza nezinto ezinje ngeecores ezininzi kunye ne-hyper-threading. Ezi zisebenza ngcono kune-CPU engundoqo enye yesantya esifanayo. Kodwa yintoni i-CPU cores kunye nemisonto? Yintoni umahluko phakathi kwazo? Kwaye yintoni omele uyazi ukuze wenze ukhetho olungcono? Yile nto ndilapha ukuze ndikuncede ngayo. Kweli nqaku, ndiza kuthetha nawe malunga ne-CPU cores kunye nemicu kwaye ndikwazise ukungafani kwazo. Kuya kufuneka ungazi nto ngakumbi xa ugqiba ukufunda eli nqaku. Ngoko, ngaphandle kokuchitha ixesha elingakumbi, makhe siqale. Qhubeka ufunda.
I-CPU Cores vs Imisonto echaziweyo-Yintoni umahluko phakathi kwazo zombini?
Iprosesa engundoqo kwikhompyuter
I-CPU Cores vs Imisonto: Yintoni uMahluko?
I-CPU, njengoko sele usazi, imele iYunithi yoPhando olusembindini. I-CPU licandelo eliphambili kwikhompyuter nganye oyibonayo-nokuba yiPC okanye ilaptop. Ukuyibeka ngokufutshane, nayiphi na igajethi edibanisayo kufuneka ibe neprosesa ngaphakathi kwayo. Indawo apho zonke izibalo zokubala ziqhutyelwa khona ibizwa ngokuba yi-CPU. Inkqubo yokusebenza yekhompyuter inceda ngokunjalo ngokunika imiyalelo kunye nezalathiso.
Ngoku, i-CPU ineeyunithi ezincinci ezimbalwa nazo. Abanye babo Iyunithi yoLawulo kunye neYunithi yokuQiniseka kwe-Arithmetic ( ALU ). La magama ayindlela yobugcisa kakhulu kwaye ayiyimfuneko kweli nqaku. Ke ngoko, besiya kubaphepha kwaye siqhubeke nesihloko sethu esiphambili.
I-CPU enye inokuqhuba umsebenzi omnye kuphela nangaliphi na ixesha. Ngoku, njengoko unokuqonda, le ayisiyiyo imeko ilungileyo onokuthi uyifune ekusebenzeni ngcono. Nangona kunjalo, kule mihla, sonke sibona iikhompyuter ezibamba imisebenzi emininzi ngaphandle komzamo kwaye zibonelela ngokusebenza kweenkwenkwezi. Ngoko, kwenzeka njani oko? Makhe siyijonge ngokweenkcukacha loo nto.
Esinye sezizathu ezikhulu zolu buchule butyebileyo bokukwazi ukwenza imisebenzi emininzi ziicores ezininzi. Ngoku, kwiminyaka yangaphambili yekhompyuter, ii-CPU zihlala zinondoqo omnye. Oko kuthetha ukuthini ukuba i-CPU yomzimba iqulethe iyunithi enye yokucubungula ngaphakathi kuyo. Kuba bekukho imfuneko emandla yokwenza umsebenzi ubengcono, abavelisi baqala ukongeza 'ii-cores' ezongezelelweyo, eziziyunithi ezongezelelweyo zokusetyenzwa. Ukukunika umzekelo, xa ubona i-CPU eyombini-engundoqo ngoko ujonge i-CPU eneeyunithi ezimbalwa zokusetyenzwa. I-dual-core CPU ikwazi ngokugqibeleleyo ukuqhuba iinkqubo ezimbini ngaxeshanye nangaliphi na ixesha. Oku, kwenza inkqubo yakho ikhawuleze. Isizathu emva koku kukuba i-CPU yakho ngoku inokwenza izinto ezininzi ngaxeshanye.
Awekho amanye amaqhinga abandakanyekayo apha - i-CPU ene-double-core ineeyunithi ezimbini zokucwangcisa ezisembindini, ngelixa ii-quad-cores zineeyunithi ezine eziphambili zokuqhuba kwi-CPU chip, i-octa-core enye inesibhozo, njalo njalo.
Funda kwakhona: 8 Iindlela zokulungisa iClock yeNkqubo iFakile uMba
Ezi core zongezelelweyo zenza ukuba inkqubo yakho ibonelele ngokuphucuka nokusebenza ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ubungakanani be-CPU yomzimba isagcinwe incinci ukuze ingene kwisokethi encinci. Ekuphela kwento oyifunayo sisokethi esinye se-CPU kunye neyunithi enye ye-CPU efakwe ngaphakathi kuyo. Awudingi iisokethi ezininzi ze-CPU kunye nee-CPU ezininzi ezahlukeneyo, nganye kuzo ifuna amandla ayo, ihardware, ukupholisa, kunye nezinye izinto ezininzi. Ukongeza koko, njengoko ii-cores zikwi-chip efanayo, ziyakwazi ukunxibelelana kunye ngendlela ekhawulezayo. Ngenxa yoko, uya kuba ne-latency encinci.
Ngoku, makhe sijonge enye into esemva kwale ntsebenzo ikhawulezayo nengcono kunye nesakhono sokukwazi ukwenza izinto ezininzi kwiikhompyuter-I-Hyper-threading. Isigebenga kwishishini lekhompyuter, i-Intel, yasebenzisa i-hyper-threading okokuqala. Into ababefuna ukuyiphumeza ngayo yayikukuzisa ukubala okuhambelanayo kwiiPC zabathengi. Eli nqaku lasungulwa okokuqala ngo-2002 kwiiPC zedesktop nge iPremium 4 HT . Emuva ngelo xesha, iPentium 4T iqulethe isiseko se-CPU enye, ngaloo ndlela ikwazi ukwenza umsebenzi omnye nangaliphi na ixesha. Nangona kunjalo, abasebenzisi bakwazile ukutshintsha phakathi kwemisebenzi ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukuba ibonakale ngathi yenza izinto ezininzi. I-hyper-threading yanikezelwa njengempendulo kulo mbuzo.
Itekhnoloji ye-Intel Hyper-threading - njengoko inkampani ithiywe - idlala iqhinga elenza inkqubo yakho yokusebenza ikholelwe ukuba kukho ii-CPU ezininzi ezahlukeneyo ezincanyathiselwe kuyo. Nangona kunjalo, enyanisweni, kukho enye kuphela. Oku, kwenza inkqubo yakho ikhawuleze kunye nokubonelela ngokusebenza okungcono ngalo lonke ixesha. Ukwenza icace ngakumbi kuwe, nanku omnye umzekelo. Kwimeko apho une-CPU engundoqo enye kunye ne-Hyper-threading, inkqubo yokusebenza yekhompyuter yakho iya kufumana ii-CPU ezimbini ezinengqiqo endaweni. Kanye ngolo hlobo, ukuba une-CPU eyombini, inkqubo yokusebenza iya kukhohliswa ukuba ikholelwe ukuba kukho ii-CPU ezine ezinengqiqo. Ngenxa yoko, ezi CPUs zisengqiqweni zonyusa isantya senkqubo ngokusetyenziswa kwengqiqo. Ikwahlulahlula kunye nokucwangcisa izixhobo zokusebenza zehardware. Oku ke, kunika esona santya sifanelekileyo sifunekayo ekuqhubeni iinkqubo ezininzi.
Ngoku, makhe sithathe imizuzwana embalwa ukubona ukuba yintoni umahluko phakathi kondoqo kunye nomsonto. Ukuyibeka ngokulula, unokucinga ngondoqo njengomlomo womntu, ngoxa imisonto inokuthelekiswa nezandla zomntu. Njengoko usazi ukuba umlomo unoxanduva lokuqhuba ukutya, kwelinye icala, izandla zinceda ukulungelelanisa ‘umthwalo womsebenzi.’ Umsonto unceda ekuhambiseni umthwalo womsebenzi kwi-CPU ngokulula kakhulu. Okukhona unemisonto emininzi, kokukhona ulungelelwaniso lomsebenzi wakho. Ngenxa yoko, uya kufumana impumelelo eyongeziweyo yokusetyenzwa kolwazi oluza nayo.
Ii-cores ze-CPU zezona nxalenye zehardware ngaphakathi kwe-CPU yomzimba. Kwelinye icala, imisonto ngamacandelo enyani alawula imisebenzi ekhoyo. Kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo apho i-CPU inxibelelana nemisonto emininzi. Ngokubanzi, umsonto wondla imisebenzi kwi-CPU. Umsonto wesibini ufumaneka kuphela xa ulwazi olunikezelwe ngumsonto wokuqala aluthembekanga okanye lucotha njenge-cache miss.
Iicores, kunye neentambo, zinokufumaneka kuzo zombini i-Intel kunye AMD iiprosesa. Uya kufumana i-hyper-threading kuphela kwiiprosesa ze-Intel kwaye akukho ndawo kwenye indawo. Isici sisebenzisa imisonto ngeyona ndlela ingcono. I-AMD cores, kwelinye icala, ijongana nalo mbandela ngokongeza ii-cores ezongezelelweyo zomzimba. Ngenxa yoko, iziphumo zokugqibela zihambelana neteknoloji ye-hyper-threading.
Kulungile, bafana, sifike ekupheleni kweli nqaku. Ixesha lokuyisonga. Le yiyo yonke into okufuneka uyazi malunga ne-CPU cores vs Threads kwaye yintoni umahluko phakathi kwazo zombini. Ndiyathemba ukuba eli nqaku likubonelele ngexabiso elikhulu. Ngoku ekubeni unolwazi oluyimfuneko ngesihloko, yibeke ngeyona ndlela ingcono ukuyisebenzisa kuwe. Ukwazi ngakumbi nge-CPU yakho kuthetha ukuba unokwenza okuninzi kwikhompyuter yakho ngokulula kakhulu.
Funda kwakhona: INnblock YouTube Xa uvaliwe eziOfisini, eziKolweni okanye eziKholejini?
Ngoko, nantso! Ungayiphelisa ngokulula ingxoxo ye CPU Cores vs Imisonto , usebenzisa esi sikhokelo singasentla. Kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.
U-Elon ungumbhali wezobugcisa kwi-Cyber ​​S. Ubhale indlela-izikhokelo malunga neminyaka eyi-6 ngoku kwaye uye wagubungela izihloko ezininzi. Uyakuthanda ukugubungela izihloko ezinxulumene neWindows, Android, kunye namaqhinga amva nje kunye neengcebiso.